Mr Ceo - Boys Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
မစ္စတာစီကိုလိုက်ဖမ်းသည် ပျမ်းမျှ 3.8 /5ထဲက 9
N / A, 37K အမြင်များရှိသည်
ပြဇါတ်, ဒရာမာ, မန်ဟwa, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း, Yaoi
Otaku Oh Deok-Hae သည်ပုံမှန်အလုပ်သမားဖြစ်ပြီးမကြာမီကပင်ဒုက္ခရောက်နေသည်။
Ohaku De Oh-Hae သည်ပုံမှန်အလုပ်သမားဖြစ်ပြီးမကြာမီကပင်ဒုက္ခရောက်နေသည်။
သို့သော်မိသားစုကောင်းကောင်း၊ လှပသောမျက်နှာ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖက်ရှင်ဆန်သောအလုပ်နှင့်ကျင့် ၀ တ်ကောင်းများရှိသည့်သူဌေးကြီးသည်အိုးဒီ့ခ်ဟေးကိုမကြိုက်ပါ။
သူဌေးကမိသားစုကောင်းကောင်း၊ လှပတဲ့မျက်နှာ၊ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဖက်ရှင်ကျမှုနဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက Oh Deok-Hae ကိုမကြိုက်ဘူး။
အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ Oh Deok-Hae သည်နုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဒီမှာဘာဖြစ်နေတာလဲ ကျွန်ုပ်အလုပ်မှထွက်ချင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သူဌေးကကျွန်ုပ်ကိုလည်းမလိုချင်ပါ။ !
လူနှစ် ဦး ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအချစ်ဇာတ်လမ်း!
Yaban ရန် Bara